ရန်ကုန် မိုးပျံရထားလမ်း စီမံကိန်း မလွတ်ကင်းသူများက လျော်ကြေးငွေအစား နေစရာမြေပေးရန် တောင်?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန် မိုးပျံရထားလမ်း စီမံကိန်း မလွတ်ကင်းသူများက လျော်ကြေးငွေအစား နေစရာမြေပေးရန် တောင်??
လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရန်ကုန်မိုးပျံရထားလမ်းစီမံကိန်းနှင့်မလွတ်ကင်းသူ များက လျော်ကြေးငွေအစား နေစရာမြေပေးရန် တောင်းဆိုမှုများကြသည်။ ဇွန် ၁ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာ ယာမြို့နယ်၊ ကျန်စစ်သားလမ်းရှိသာ သနာ့ဗိမာန် ဓမ္မာရုံတွင် အသိပေးရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ လှိုင်သာ ယာပြည်သူ ၅ဝဝ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အများစုက အထက်ပါအတိုင်း တောင်းဆိုသူများကြခြင်းဖြစ် သည်။ လှိုင်သာယာအတွင်း ပဒန် ရပ်ကွက်မှ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ အမျိုးသားကြီးတစ်ဦးက ”ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူတွေ ဘဝကတ ကယ့် တကယ်ငွေ ပေးမယ်ဆိုရင် အားလုံးကို နှင်လိုက်သလိုဖြစ်မှာ စိုးတယ်။ ဘဝရပ်တည်မှုအတွက် မြေပိုင်လေးတွေဖြစ်အောင် အထက်လူကြီးများ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖန်တီးပေးပါလို့ အနူးအညွတ် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်”ဟု အဆို ပါအခမ်းအနားတွင် တင်ပြခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မိုးပျံရထားလမ်း စီမံ ကိန်းတွင်ပါဝင်သော လှိုင်သာယာ ဘူတာအတွက် သိမ်းဆည်းထား သည့် မြေဧရိယာ ၁၄၄ ဒသမ ၆ ဧကအနက် ၂၄ ဒသမ ၆ ဧက မှာ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းပါဝင် ကြောင်း၊ ၂၄ ဒသမ ၆ ဧကအ တွက် တစ်ဧကလျှင် ကျပ်သိန်း ၃ဝ နှုန်းဖြင့် လျော်ကြေးပေးထား ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းအ တွင်းရှိ ကျန်ဧက ၁၂ဝ အတွက် လျော်ကြေးပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့က စိစစ်မည်ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထား (အောက် မြန်မာပြည်)မှ အထွေထွေမန်နေ ဂျာ ဦးထွန်းအောင်သင်းက ပြောသည်။ ”အထူးသဖြင့် လှိုင်သာယာ ဘူတာမှာ မြေယာလျော်ကြေးပေး ရမယ့် လယ်သမားတွေကိုပေးတဲ့ အခါမှာ စနစ်တကျပေးလို့ရအောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းညွှန် ချက်အတိုင်းသွားပါမယ်။ အလား တူ ပါရမီလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ချမ်း သာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေများတယ်။သူတို့တွေကို မြေယာလျော်ကြေး ကို စနစ်တကျတိုင်းတာတွက်ချက် ပေးဖို့လိုပါတယ်”ဟု ၎င်းင်းကပြော သည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီတို့ ပူး ပေါင်း၍ ရန်ကုန်မြို့ပြလူထုရထား ပို့ဆောင်ရေး (YUMRT) ကို ဖော် ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမအဆင့် အနေဖြင့် လှိုင်သာယာဘူတာမှ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းအတိုင်း လှိုင်မြစ် ကိုဖြတ်၍ ပါရမီလမ်းအတိုင်း ပါ ရမီဘူတာအထိအရှည် ၁၈ ကီလို မီတာရှိ လှိုင်သာယာ-ပါရမီရထား လမ်းကြောင်းအား ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်မှ စတင် ဖော်ဆောင်ရန် လျာထား ကြောင်း သိရသည်။ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ပါရ မီဘူတာမှ တိုးကြောင်ကလေး ဘူ တာ ရထားလမ်းကြောင်းကို ဆက် လက်ဖော်ဆောင်ကာ ရန်ကုန်-မန္တ လေးရထားလမ်းနှင့် ချိတ်ဆက် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အမှန်တကယ်နေထိုင်စရာ မရှိသူများအား လျော်ကြေးငွေ အစား မြေနေရာများသာ ပြန် ပေးစေလိုကြောင်း လှိုင်သာယာ မြို့နယ်အတွင်း ကျူးကျော်နေထိုင် သူ ကျောင်းဆရာမ(ငြိမ်း)ဒေါ်သန်း ကြွယ်က ပြောသည်။
”ဒီမှာလုပ်ကိုင်စားနိုင်ဖို့ဆို ပြီး ကျူးကျော်အိမ်လေးတွေမှာ လာနေကြတဲ့လူတွေက အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ကနေ လုပ်ကိုင်စား ဖို့ အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့သူတွေပါ။လျော်ကြေးပေးပြီး လွှတ်လိုက်ရင် သူတို့ကိုပြန်တော့လို့ နှင်လိုက်တာ နဲ့အတူတူပဲ။ လျော်ကြေးပေးလွှတ် လိုက်ရင် ဘယ်သွားနေကြမလဲ။နေစရာ မြေကွက်လပ်လေးစီစဉ် ပေးသင့်တယ်”ဟု ၎င်းင်းက ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ယင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းကြီး သည် လှိုင်သာယာ၊ မရမ်းကုန်း၊ တောင်ဥက္ကလာနှင့် ရန်ကင်းမြို့နယ်တို့သို့ ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ် သည်။လှိုင်သာယာ-ပါရမီရထား လမ်းကြောင်း စီမံကိန်းအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ၂ဝ၂၇ ခုနှစ်တွင် ရထားစတင် ပြေးဆွဲနိုင်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။